Ajụjụ - Ningbo ACE igwe Co., Ltd.
24Hours Online: + 86-18968212829
Electric Concrete vibrator Na ụba
Aka jidere Ihe Vibrator
Vibrator dị na mpụga
Ije ije-n’azụ Power Trowel
Gbaa ịnyịnya-On Power Trowel
Ihe ndi mmadu ji eme ihe
KCD Mkpa Finrụcha Screed
Ihe nyocha Laser
Ihe Mgbidi Vibrator
Igwe na-egosi okporo ụzọ
Format efere Compactor
Reversible efere Compactor
Concrete igwekota Truck
Ngwongwo Ogwe osisi
CX17T / SX18A / CX18B
Ee, anyị chọrọ iwu mba ụwa niile ka ịnwee nke kacha nta na-aga n’ihu. Ọ bụrụ n ’ị na - achọ iregharị mana na ọnụọgụ pere mpe pere mpe, anyị na-akwado ka ị lelee weebụsaịtị anyị
Maka ihe atụ, oge ndu bụ ihe dị ka ụbọchị 7. Maka imepụta oke, oge ndu bụ 20-30 ụbọchị mgbe ị natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nnwapụta ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gafere ire gị maka ire ere gị. N'ọnọdụ niile, anyị ga-anwa igbo mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị nwere ike ime ya.
Ozi: Anyị na-enyefe ihe owuwu ihe owuwu ọhụrụ ga-eme ka ọrụ gị dị mfe
Ọhụụ: bebụ ezigbo ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke akụrụngwa maka ndị ọrụ ngo ọkachamara
Valkpụrụ: ndị ahịa lekwasịrị anya, Innovation, Ekele, mmeri-mmeri ọnụ
Okwu: Obodo Shenjiao, Gulin, Ningbo, China 315159